FlowCon ikuku diffusers na nnukwu POWERFLOW ikuku jets ga-eji na a dịgasị iche iche nke ngwa. Ha bụ nnọọ oru oma na entrapping na agwakọta ikuku. The ogologo otutu nke ikuku jets nwere ike n'ụzọ dị irè propel kpụ ọkụ n'ọnụ ikuku na ngwa nju oyi n'ala ebe. The uka na ike ọsọ nke jets nwere ike ime ka ikuku mgbasa 10'-40 'n'ofè diffuser. Na a FlowCon POWERFLOW diffuser jikọọ a etemeete ikuku unit, ndị na-abata ikuku nwere ike chụgara evenly n'elu nnukwu n'ichepụta ebe. Iji ịzọpụta ike, unheated ikuku nwere ike na-eduzi elu mix na-ekpo ọkụ n'uko ikuku oyi na mgbe ibugharị n'ala ka ventilet-arụ ọrụ ebe ke ndaeyo. A ofufe na FlowCon POWERFLOW diffusers pụrụ nanị ga-eji ịfụ na-ekpo ọkụ n'uko ikuku n'ala mix na oyi n'ala ikuku. Energy ego nwere ike ịbụ ọkpụrụkpụ. Na-ekpo ọkụ na-arụ ọrụ na gburugburu, mfe ikuku mgbasa nwere ike melite arụpụtaghị. Large POWERFLOW ikuku jets nwere ike putara ighe positioned tinyere a diffuser ka ventilet onye ọrụ ụgbọ. PowerFlow ákwà ikuku ducts anapụta evaporative mma ikuku n'ala site nnukwu ọdụ ụgbọ mmiri. PowerFlow ikuku jets mbio 1 "6" n'obosara. Ngwa na-atụ aro na-agụnye; ulo oru mbo, warehousing, na n'ichepụta ebe, gyms, ọdọ mmiri, Retail, nri na-echekwa, na Nwa Oge owuwu.
10 oz. Vinyl ntekwasa polyesterelu okpomọkụ poli ductpolyester - antimicrobial polyethylene
USB Halo Suspension HD Okporo ígwè
Nri na-echekwa gyms Industrial Manufacturing Areas ọdọ mmiri
Nwa Oge owuwu
Air Jet plọg ghọọ mmanụ igbapu Bịaruo ụdọ Fabric Damper Fittings Esịtidem End Cap
Mkpọchi uwe na Velcro Connections
polyethylene bụ resilient ka ọtụtụ Chemicals na ga-ebili ka ọtụtụ ikuku agbawo ahụ. Ọ nwere a gbazee okpomọkụ nke 180 ° F na e nwere ike kpochara site a ịgba sooks nozulu na ahịhịa. Polyethylene bụ ọkụ retardant na osobo ASTM E-84 Class 1, AC 167, LC 1005. ICC-Njedebe akụkọ: ESR-2646.
polyester bụ a adịchaghị ọkwa ntekwasa ákwà. Ọ nwere a gbazee okpomọkụ nke 350 ° F na ike ga-laundered na obere ngalaba. Polyester bụ ọkụ retardant osobo ASTM E-84 Class 1, AC 167, LC 1005. ICC-Njedebe akụkọ: ESR-2646.
* Special iji naanị.
polyester bụ a adịchaghị ọkwa uncoated ákwà na antimicrobial n'ụlọnga. Ọ nwere a gbazee okpomọkụ nke 350 ° F na ike ga-laundered na obere ngalaba. Polyester bụ ọkụ retardant, osobo ASTM E-84 Class 1 na na nkewa site Mankeumman.
10 oz. Vinyl ntekwasa polyester
Vinyl bụ a ntekwasa ákwà ga-ebili ka ọtụtụ ikuku agbawo ahụ. Ọ nwere a gbazee okpomọkụ nke 180 ° F na e nwere ike kpochara site a ịgba sooks nozulu na ahịhịa. Vinyl bụ ọkụ retardant na osobo ASTM E-84 Class 1.
XStatic bụ ihe mgbochi-static ntekwasa ákwà na atụmatụ ihe antimicrobial n'ụlọnga. Ọ nwere a gbazee okpomọkụ nke 250 ° F na ike ga-laundered na obere ngalaba. XStatic bụ ọkụ retardant na osobo ASTM E-84 Class 1.
High temp faiba glaasi
High temp faiba glaasi bụ a ntekwasa faiba glaasi ákwà na atụmatụ a gbazee okpomọkụ nke 500 ° F. Ọ nwekwara ike-eji maka ndị ọzọ ngwa. The faiba glaasi bụ ntekwasa ike nwere ikuku jets. High temp faiba glaasi bụ ọkụ retardant, osobo ASTM E-84 Class 1 na na nkewa site Mankeumman.
Erughị ala cable bụ ihe kasị echekwa nhọrọ. Maka niile diameters, Single cable ruo 30 "dayameta na-amụba okpukpu abụọ 48" dayameta na atọ n'elu na. Snaphooks na-spaced on 36 "ebe a na dị na plastic, igwe anaghị agba nchara. USB dị na kpaliri, igwe anaghị agba nchara, na vinyl ntekwasa. The usoro mejupụtara a USB (3/16 "dayameta), turnbuckle, eyebolts na cable clamps.
New Halo erughị ala nkwusioru usoro (HTS) enye ọdịdị gị FlowCon diffuser usoro a ga-inflated mgbe ikuku njikwa usoro bụ gbanyụọ. Nke a na nhọrọ nwere ike ga-eji na a mfe otu n'usoro cable nkwusioru ma ọ bụ otu HD okporo ígwè na-FlowCon diffuser achọ inflated enweghị airflow. Oke site na 10 "ka 36" n'obosara, a nhọrọ bụ zuru okè n'ihi na ngwa ebe deflated diffuser n'aka ala bụ a nsogbu. Ngalaba nwere ike mfe iwere ala na-asa na adịghị mmezi ọrụ mmanye. Components agụnye ọkọlọtọ otu n'usoro erughị ala USB ma ọ bụ anyị HD otu okporo ígwè usoro.
c) HD Okporo ígwè:
New HD anodized aluminum okporo ígwè bụ anyị adịchaghị tren usoro. Sleek ezigbo anya n'ihi na anyị FlowCon ákwà diffuser usoro. Maka niile diameters, Single okporo ígwè ruo 30 "dayameta na-amụba okpukpu abụọ 48" dayameta na atọ n'elu na. Gliders na-spaced on 36 "ebe a na dị na plastic. The usoro mejupụtara HD okporo ígwè, okporo ígwè na-akwado, couplers, na vetikal akwado (speed njikọ). Okirikiri bends dị izute n'ikpere aka okirikiri.
Osote: Micro Flow Fabric duct